Abasebenzi baka-Apple baya kulinga ngokuchasene neMidlalo ye-Epic | Ndisuka mac
Abasebenzi baka-Apple baya kulinga ngokuchasene neMidlalo ye-Epic
Isepha opera phakathi kweMidlalo ye-Apple kunye nee-Epic imalunga nokufikelela kwelona liphezulu. Ubuninzi bempixano, imilo kunye nokugculelwa esidlangalaleni kuya kuba neyona ndawo iphakamileyo kusuku lokuqala kwetyala. Esi iya kuba sisiqalo sesiphelo kwaye sicinga ukuba ayizukuthatha ixesha elide ukufumanisa ukuba ngubani kwezi nkampani zimbini olungileyo. Ukuba iApple iyazikhusela ayisebenzisi bodwa okanye Imidlalo ye-Epic kwimfuno yabo yokuba "simahla". Nokuba kunganjani na, umntu ngamnye kuya kufuneka aphikise ityala labo kwaye u-Apple sele ebonisile ukuba ngubani oza kuba noxanduva lokukhusela inkampani. Abasebenzi baka-Apple balingo.
I-Apple ivakalise uluhlu lwayo lwamangqina kwityala labo elizayo ngokuchasene neMidlalo ye-Epic. Abaphathi abaliqela be-Apple banikela ubungqina, kubandakanya ne-CEO ye-Apple UTim Cook, iqabane lakhe le-Apple uPhil Schillery, kunye no-Apple usekela-mongameli omkhulu we-software yobunjineli, uCraig Federighi. Uluhlu lwamangqina luka-Apple lukwabandakanya i-app kamongameli kamongameli uMatt Fischer. INtloko yeRisk and Fraud Engineering Algorithms uEric Friedman. UMlawuli wezoRhwebo kunye neNtlawulo u-Eric Grey. UMphathi woPhuhliso loMdlalo uMark Grimm kunye nabanye abasebenzi kwezentengiso, kubudlelwane bonjiniyela, nakwimimandla enxulumene noko.
Umphathi omkhulu wenkampani iya kuba ngoyena mntu ixesha elingaphezulu lokuphendula imibuzo yamaqela. UCook noFederighi kulindeleke ukuba bahlolwe kwaye baphendule imibuzo ubuncinci beeyure. Ngoku, uSchiller, ophethe iVenkile yeApple, uzakungqina ngexesha zizonke iiyure ezili-10.
Abaphathi bethu abaphezulu bajonge phambili ekwabelaneni nenkundla ngefuthe elihle elibe nalo kwiVenkile yeApple kwizinto ezintsha. Kwakhona kuqoqosho lwehlabathi kunye namava abathengi kule minyaka ili-12 idlulileyo. Siqinisekile ukuba ityala liyakubonisa oko I-Epic yaphule ngabom isivumelwano sayo kukonyusa ingeniso yabo, yiyo loo nto iphumele ekususweni kwabo kwiVenkile ye App. Ngokwenza njalo, i-Epic yathintela amanqaku okhuseleko eVenkile yeApple ngendlela eya kukhokelela kukhuphiswano oluncinci kwaye ibeke ubumfihlo kunye nokhuseleko lwedatha yabathengi emngciphekweni omkhulu.
Amangqina e-Epic abandakanya i-CEO ye-Epic Games UTim Sweeney kunye nabanye abasebenzi be-Epic, kunye namangqina angaphandle aya kubandakanya abaphathi abavela kuFacebook, Microsoft, Nvidia kunye nowayesakuba ligosa eliyintloko le-software uScott Forstall. U-Epic wathi ngoFebruwari ukuba wayezama ukunxibelelana noForstall, kodwa kwakunzima ukumfumana. Izicwangciso ze-Epic zokutsalela umnxeba iForstall ngenxa yokubandakanyeka kwakhe kusungulo lweVenkile yeApple ngaphambi kokumka kwakhe kwinkampani ngo-2013.
Ityala liza kuqala ngoMvulo umhla we-3 kuCanzibe. Luvavanyo lobuso ngobuso kodwa ngekhe kubekho jury ichaphazelekayo. Ebutsheni bale nyanga, uJaji Yvonne González wanyanzelisa ukuxoxwa kwetyala lomntu, esithi eli tyala "libaluleke ngokwaneleyo" ukuba inkundla imamele buqu. Onke amanyathelo okhuseleko nococeko akhoyo aya kuthotyelwa ukuqinisekisa ukuba akukho mntu unokosulelwa yiCoronavirus.
Kushiyeke ixesha elingaphantsi kweenyanga ezimbini kulindeleke ukuba ityala liqale. Sithethile kakhulu ngale opera yesepha, kuba kuninzi ekufuneka sikuxelele. Kubaluleke ngakumbi kunokuba sinokucinga, kuba kwimeko ye-Epic Games ithatha uloyiso, iya kuphawula indlela entsha yokubona izinto eApple. Ukongeza, kuya kufuneka ujongane nenani elingenasiphelo leemfuno ezifanayo eziza kuvela kubo bonke abakhuphisana nabo kunye nabaphuhlisi kulo naliphi na inqanaba. Andiqondi ukuba iApple ingena kwezi "aubergines" ngaphandle kokuba igqunywe kakuhle kwaye ingayazi into abayenzayo ngalo lonke ixesha.
Siza kujonga ngenyameko ukuze sibone indlela ezenzeka ngayo iziganeko ngakumbi njengokuba umhla wetyala usondela, ngekhe ndimangaliswe ukuba kufike isimanga sokugqibela. Ngokukodwa kwimidlalo ye-Epic. Esinye isiganeko esitsha e-Fortnite okanye isibhengezo esitsha ... into inokuza. Kukuzingela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Abasebenzi baka-Apple baya kulinga ngokuchasene neMidlalo ye-Epic
I-Vivaldi navigator ingena kwi-Apple Silicon ngesantya esiphezulu kuloliwe
Emva kokuba iApple iyekile iMac Pro ziye zathengiswa ngelixa izinto zihlala zikhona